WWE News: Renee Young dia nanokatra ny antsipirian'ny fanambadiany miafina tamin'i Dean Ambrose - Wwe
WWE News: Renee Young dia nanokatra ny antsipirian'ny fanambadiany miafina tamin'i Dean Ambrose
Inona ny tantara?
E! Ny vaovao dia nanambara fa ny kintana Total Divas sy ny toetran'ny WWE, Renee Young, dia nanambara ny sasany amin'ny antsipiriany momba ny fanambadiany tamin'i WWE Superstar Dean Ambrose tamin'ny 9 aprilyfaha. Nambarany fa tsy nifandray tamin'ny lafiny teknika velively izy ireo ary ny drafitra rehetra dia ny hanambady any Las Vegas rehefa mety ny fotoana.
Hanitatra an'ity i Renee amin'ity teny manaraka ity:
'Tsy tena nilaza akory aho hoe efa nifamofo izahay. Niaraka nandritra ny telo taona sy tapany izahay ary fantatray fa te hanana mariazy Vegas izahay, satria monina any Las Vegas izahay dia nieritreritra fotsiny fa hanao izany any ary hanao azy ambany ambany fotsiny. Nahazo ny fahazoan-dàlana hanambady izahay enim-bolana lasa izay, fony tany Reno.
Raha tsy fantatrao ...
Tamin'ny taona 2009, niasa tao amin'ny The Score any Canada tamin'ny seho antsoina hoe Right After Wrestling i Young; izay lasa Aftermatch taty aoriana. Mpamaritra WWE taloha hafa no tao amin'ity fandaharana ity koa, Mauro Ranallo sy Jimmy Korderas.
Ny fon'ny raharaha ...
Nilaza i Renee fa ny hevitry ny hanambady dia tamin'ny fotoana hatoriany hatrizay. Nilaza tamin'i E izy! Vaovao izao manaraka izao momba ny fotoana:
'Handeha hatory izahay! Handeha hatory izahay ary tiany ny nanaparitaka ny peratra ary toy ny hoe, 'Ralehilahy, tokony hanao an'izany isika izao.' Ka lasa nandeha tany amin'ny Yelp izahay ary nahita pasitera 24 ora tonga tany an-tokotaninay. Tena mora raisina ary ny anarany dia Pasitera Pete ary nonina teo akaiky teo izahay, ary teo izy.
Tena niahiahy izy ireo teny an-dalana satria tamin'ny 1 ora maraina, ara-teknika ny andro alahady ary tena niahiahy izy ireo niantso anay, toy ny hoe: 'Mety ve ny zava-drehetra? Efa nisotro toaka ve ianareo? Fa misy inona?' Toy ny hoe: 'Tsy maninona, afaka midina ianao.' Noho izany dia tsy maintsy nitory izahay ary niantso izahay ary namoha ny sakaizanay iray dia vita. '
Nivoaka ny kitapo ilay saka roa andro taty aoriana tao amin'ny Talking Smack raha nanao fanamarihana mahaliana maromaro i Dolph Ziggler sy i Kevin Owens. Hitan'ny mpijery ny peratra amin'ny rantsan-tanan'i Renee ary hiverina am-pahendrena any Raw izy ny alina lasa teo mba hahita peratra eo amin'ny rantsan-tanan'i Dean koa.
Ny ampitso maraina dia nanaiky izany tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Twitter i Renee:
Mahafinaritra ny fanambadiana. Misaotra amin'ny fitiavana rehetra
- Renee Young (@ReneeYoungWWE) 12 aprily 2017
Vakio ihany koa: Dean Ambrose sy Renee Young: Ny tantaram-pitiavana izay nivoatra tamin'ny WWE sy ny manodidina
Hahita an'i Renee Young manaraka ianao amin'ny Payback Kickoff Show amin'ity alahady ity izay miakatra amin'ny karama marika marika Raw. Mahagaga fa ny Tompondakan'ny Intercontinental Dean Ambrose dia tsy manana lalao amin'ny seho amin'ity alahady ity hatramin'ny nanoratana ity.
Ny fandraisana ny mpanoratra ...
Tsy tsiambaratelo ho an'ireo mahalala ahy, Dean no mpiady mahery indrindra amiko, ary tsy lazaina intsony fa Renee dia iray amin'ireo tiako indrindra amin'ny WWE ihany koa. Ireto antsipiriany kely ireto dia fitsaboana manokana ho ahy amin'ny maha-mpankafy ahy ary ny tantara amin'ny ankapobeny dia mety ho an'ny lehilahy maloto toa an'i Dean Ambrose.
Mahazo tsiky foana aho rehefa miaraka amina fakan-tsary ireo mpivady. Mazava ho azy fa tena mifankatia izy ireo, ary azonao atao ny milaza fa manandrana ny fara heriny i Dean mba hahatonga an'i Renee hamaky mivantana eny amin'ny habakabaka.
Mandefasa torohevitra vaovao aminay amin'ny info@shoplunachics.com
ahoana no ataoko mba hitohizan'ny resaka
ahoana no ahalalana rehefa misy mampiasa anao
inona no hatao rehefa tsy misy namanao any am-pianarana
ahoana no ahafantaranao raha liana aminao ny mpitondratena iray
eddie guerrero mandainga hangalatra
britney lefona net mendrika 2019
zava-misy telo tena tsara momba anao